Pakistan: Andron’ny Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Pakistan: Andron'ny Bilaogy
Voadika ny 10 Aogositra 2017 12:30 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aogositra 2006 no nivoaka ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Tsy dia fantatro loatra izay fiarahabana sahaza an'izao andron'ny aterineto miroborobo izao, ka ny lazaiko dia tratry ny Andron'ny Bilaogy Manerantany ho an'ireo bilaogera namana sy mpamaky ny GV! Manantena fa hitombo avo folo heny ny herin'ny blaogy sy ny fanaovan-gazety an'olo-tsotra ary hamely mafy ireo fikambanana mahazatra mpanao propagandy, toy ny Fox News Network, izay efa malaza ratsy amin'ny fihenan'ny mpijery, ary fahombiazana lehibe amin'izany.
Ao anatin'ny fankalazana ity andro manokana ity, tiako ny manararaotra izany (araka ny soso-kevitry ny GV) mba hilaza vitsivitsy momba ny tenako ka ahafantaran'ireo bilaogera namana bebe kokoa ny momba ahy.
Nahoana aho no nanomboka nibilaogy?
Amin'ny ankapobeny, mba hiaro ahy amin'ny fandaniana hijery mpitsabo, nisafidy izany aho mba hanala ny fahadisoam-panantenako amin'ny alalan'ny fitaovana tranonkala maimaim-poana. Tena manafaka sy tsy mandany!!
Inona no tena soratako indrindra amin'ny bilaogy?
Ny asa (ketrika) sy ny politika ivelany an'ireo sangany monina ao amin'ny lalana 1600 Pennsylvania sy ny lalana 10 Downing no tena jereko. (Etazonia sy Britanika)
Inona no manosika ahy hanohy hibilaogy?
Voalohany indrindra, mba hanorisory ireo mpijery Fox News maro araka ny vitako amin'ny lahatsoratra. Tena matotra, misy ifandraisany amin'ny fizarana ny hevitro amin'ny zava-mitranga manerantany amin'ireo bilaogera hafa izany.
Nanomboka misy fiantraikany eo amin'ny politika ao amin'ny fireneko ve ny bilaogy?
Tena kely tokoa ny fiarahamonina bilaogy ao Pakistan raha oharina amin'ireo firenena hafa, saingy midadasika kokoa raha hanorisory ny manampahefam-panjakana izay nanomboka nanamarika ny feo mibilaogy fanoherana sy ny fitsikerana ary vokatr'izany, miaritra fandraràna manokana sy ankapobeny tsy ara-drariny i Pakistan. Faly aho milaza fa nahitana fanoherana avy amin'ireo bilaogera izay miha-mafy loha amin'ny fanohizana ny bilaogin'izy ireo ny fanakanana ny bilaogy ao Pakistan ary mitombo isan'andro hatrany ny fiarahamonina bilaogy Pakistaney.
Avelao aho hiverina amin'ny antony lehibe nahatonga ity lahatsoratra ity, izay hanasongadina ny hevitra farany sy mahaliana indrindra avy amin'ny fiarahamonin'ny bilaogy Pakistaney.
Hypocricy Thy Name miresaka momba ny lahatsoratr'i Ralph Peters sy ny Bemidina ao Balochistan;
Fountainhead kosa nanoratra tantara hafa mikasika ny Neocons; Teeth Maestro indray manasongadina hevitra mahaliana momba ny haino aman-jery; All Things Pakistan miresaka ny fitsipaham-pitokisana ny PM; PWC-ing kosa manoratra ny Bugti sy ny fikomiana Baloch; PAKCAST mampiseho ny tatitra (am-peo) an'i Ambreen Ali mikasika ny ezaka Fanampiana noho ny Horohorontany; ary farany izaho nanoratra momba ny tena fampihorohoroana amin'ny zotra an'habakabaka.
Eny, izay no tamin'ity herinandro ity, mbola hiverina (miankina amin'ny asako sy ny fangatahan'andro tsy hay fehezina) miaraka amin'ireo angona bilaogy Pakistaney hafa aho.
1 herinandro izayPakistana